Tusaalooyin: Martin Vrijland
Trump ayaa doonaya in "internetka laga jaro" ka dib markii weerar argagixiso London lagu qaaday baaldi baaldi ah bacda
Filed in NEWS ANALYZES, Tusaalooyin	by Martin Vrijland	on 15 September 2017	• 12 Comments
Weerar argagixiso oo ka dhacay dhulka hoostiisa London oo leh baaldi cad oo ku yaalla bacda Lidl, ayaa xoog wayn ku soo rogay cagaheeda. Gabadha sawirada ah ayaa si weyn u dhaawacantay iyadoona ay la socoto 18 iyada oo wadar ahaan lagu dhaawacay isbitaalka. Waa in ay ahayd qarax weyn oo nasiib wanaag ah shaqaalaha ambalaaska ayaa lahaa xiriir ku filan [...]
Barcelona Ramblas sida loo cambaareeyo cambaareynta: Julian Cadman, wakiilka geesiga, imaamka been abuurka ah iyo argagixisada ka badbaaday
Filed in NEWS ANALYZES, Tusaalooyin	by Martin Vrijland	on 21 August 2017	• 25 Comments
Qoraalkeygii hore ee ku saabsan weerarkii Barcelona Ramblas iyo weerarkii lagu guul dareystay ee Cambrils iyo qarax gaasta Alcanar habeenkii ka hor, waxaan ku tilmaamay qodobbada ugu muhiimsan ee qoraalka kaas oo inta badan lagu aqoonsan karo weerarro. Munaasabadan oo ay ka soo qeybgaleen masuuliyiin ka tirsan dowladda KMG ah,
Ronald Bernard wuxuu kufsaday jilaa wanaagsan iyada oo loo marayo warbaahinta kale
Filed in [AIVD ALARM], NEWS ANALYZES, Tusaalooyin	by Martin Vrijland	on 14 August 2017	• 74 Comments
Dhowrkii bilood ee la soo dhaafay, waxaan si joogto ah u su'aalay: "Maxaad u maleyneysaa Ronald Bernard?" Had iyo jeer waan ka fogaaday su'aashaas ama waxaan si kooban u jawaabay oo, daqiiqad, fiiriyey inta dad ee ku dhici lahaa ceelkaas oo kale. Sababtoo ah Ronald Bernard waa actor, wuxuu iigu taagan yahay ulo ka sarreeya biyaha. Ma aha in aan [...]
Weerar argagixiso oo ka dhacay magaalada London
Filed in NEWS ANALYZES, Tusaalooyin	by Martin Vrijland	on 5 June 2017	• 81 Comments
Weerarkii argagaxisada ee habeenkii Sabtida 3 June ayaa mar kale aad loo xusay waxaana uu muujinayaa dhammaan khiyaamooyinka been-abuurka. Lama sheegin lambarka 3 June; taas oo dhab ahaantii kufsadeen fikirka, sidaa daraadeed 3 x 6 waa 666. Maya, bal aynu eegno waxyaalihii cajiibka ah ee aad si fudud uga heli kari weydaan. Dabcan [...]
Aart Zeeman, Jinek, Brandpunt iyo warshad been abuur ah Ruush
Filed in NEWS ANALYZES, Tusaalooyin	by Martin Vrijland	on 8 Febraayo 2017	• 60 Comments
Maalintii shalay ka soo wareegtay Aart Zeeman ayaa martigeliyay Jinek si uu u sharaxo baadhitaankiisa wanaagsan iyo helitaanka warshad warbaahin been abuur ah oo ku taala Saint Petersburg. Shalay ayaa wargeyska dhabta ah ee Brandpunt lagu muujiyay NPO2. Natiijadii ugu fiicneyd ee Aart Zeeman ee cilmi-baaristu waxay tahay in markhaatiyada lagu soo oogay ay si buuxda [...]
Guud ahaan Wadarta: 1.349.041